Donin’ilay Jamaikana mpanatontosa filma ireo indostria mpanao fitrandrahana ao Karaiba · Global Voices teny Malagasy
'Ny krizy iainantsika dia mitarika fahasimbana bebe kokoa, tsy latsaka.'
Voadika ny 29 Septambra 2021 5:05 GMT
Toeram-pitrandrahana Alpart JISCO any Nain, St. Elizabeth, Jamaika. izay mihidy amin'izao fotoana izao. Jiuquan Iron sy ny Steel Company no tompony, nikatona tamin'ny taona 2019 ny orinasa “miandry ny fanavaozana sy ny fanitarana”; Tsy mazava hoe rahoviana ny fotoana hisokafany. Sary avy amin'i Emma Lewis, nahazoana alàlana.
Araka ny anarany, mifantoka amin'ny fiantraikany manimba isan-karazany avy amin'ny indostrian'ny fitrandrahana, indrindra ny solika milevina sy ny fitrandrahana (ambanin'ny tany) ny Global Extraction Film Festival (GEFF) 2021 – izay ahitana horonantsary fanadihadiana maherin'ny 150, sarimihetsika fohy sy “fohy maika” avy amin'ny firenena 40 mahery amin'ity taona ity.
Naorin'ilay mpanatontosa sarimihetsika Jamaikana Esther Figueroa (Vagabond Media) sy Emiel Martens (Caribbean Creativity) tamin'ny taona 2020, napetraka tanatin'ny ezaka an-tsitrapo sy ny fiaraha-miombona antoka amin'ny sarimihetsika ny fetibe tsy ilaina teti-bola. Ny programan'ny taona 2021 dia nahitana sarimihetsika izay efa azon'ny besinimaro jerena, sy ny sasany izay tsy mandrakotra lohahevitra mitovy aminy, toy ny olan'ny rano ao Puerto Rico, ny fandravan'ny Rivodoza Dorian an'i Bahamas, ny nahitana akoranafo goavambe any amin'ny morontsirak'i Guyana, ny andraikitry ny vehivavy amin'ny toekarena tsy anaty rafitra ao Haiti, tetikasa fanarenana tarihan'ny fiaraha-monina any Trinidad ary fanapoizinan'ny famonoana bibikely any Martinique. Ny sarimihetsika nataon'i Figueroa manokana dia manasongadina, ankoatra ny zavatra hafa, ny tolona mitohy hiarovana an'i Cockpit Country saropady ara-tontolo iainana ao Jamaika mba tsy ho tratran'ny fitrandrahana bauxite.
Ilay mpamorona sarimihetsika Jamaikana Esther Figueroa. Saripikan'i Mary-Angela Fatta, nahazoana alàlana.
Mpanoratra sy mpanabe, mpanatontosa filma mahaleotena teraka tao Kingston i Figueroa, manana an'i “Jamaica for Sale” (2009) ho filma efa navoakany, efa nahazo loka, lahatsarim-pamakafakana nisongadina momba ny fizahantany tsy lovain-jafy, sy “Fly Me To The Moon” (2019) izay milaza ny tantaran'ny “metalin'ny maodernite” —aluminum [viraty]— amin'ny fomba mampiseho ny fifandraisantsika rehetra amin'ny Planeta Tany. Tamin'ny taona 2013 i Figueroa lasa mpanoratra miavaka ao amin'ny Fonenana ao amin'ny Departemantan'ny teny Anglisy ao amin'ny Oniversiten'i Hawaii; nahatratra ny famaranana tamin'ny Loka Nasionaly ny Fahatsarana indrindra Antilles amin'ny Famoronana Marokolontsaina ny tantara ara-tontolo iainana “Limbo” (2014) navoakany.
Nitafatafa tamin'i Esther tamin'ny alàlan'ny mailaka aho talohan'ny fetibe, izay notontosaina ny 9-12 septambra.
Emma Lewis (EL): Inona ny tanjona maika indrindra amin'ny GEFF2021?
Esther Figueroa (EF): Nanomboka ny Fetiben'ny Fitrandrahana Manerantany (GEFF) aho mba hitodihana any amin'ny fiantraikany amin'ny lafiny sosialy sy tontolo iainana amin'ireo karazana indostria fitrandrahana manerana ny planeta, sy hankalazana sy hanohanana ireo vondrom-piarahamonina manerana an'izao tontolo izao izay miaro amin-kerim-po manoloana ny famongorana, sady mamorona hoavy azo iainana. Tamin'ny taona 2020, nisy fitantarana malaza dia malaza fa nanavotra ny planeta tany ny areti-mandringana COVID-19 ary hivoaka amin'ny lafiny hafa amin'ity ‘vavahady’ ity isika ary hizotra amin'ny fomba hafa sy tsara kokoa ny toe-javatra. Natsangako ny GEFF 2021 hanoherana an'io fitantarana io, satria tsy marina fotsiny izao izany. Ny krizy iainantsika dia mitarika fahasimbana bebe kokoa, tsy latsaka.
Kendren'ny GEFF ny hisian'ny firaisankina, fiaraha-mizaka sy ny fahalalahan-tanana, mba hahitan'ny olona mizaka ny mafy fa tsy irery izy ireo, fa iraisana amin'ny hafa na aiza na aiza ny tolon-dry zareo. Loharanom-panovozana ny GEFF manome votoaty avy amin'ny vazantany efatr'izao tontolo izao, manampy amin'ny fampahalalana, fanabeazana ary haharanga ny olona ny lohahevitra (olana) lehibe. Amin'izany fomba izany, afaka mahazo aingam-panahy isika rehetra, hahazo hery ary hiasa [hihetsika] ao anatin'ny fahalalàna fa tsy handositra ho any amin'ny nofinofy sy ny fitsoahana. Ao anatin'ny fikatrohako mahazatra ny GEFF ary miezaka manohana sy mampifandray olona, ​​hanamafisana ny feon'izy ireo ary hanampy amin'ny fanamafisana ny ezaka rehetra hampijanona ny politikan-toe-karena mikorontana sy ny kolontsaina materialy manimba ny planeta sy ny hoavy azon'ny taranaka hoavy iainana.
Nandritra ny dia nidina an-kianja ho any Ridge Red Bank, St. Elizabeth, niaraka tamin'ny Voices for Climate Change tamin'ny taona 2019, nifilma tantsaha sy tanora deejay, Donn Gass, i Figueroa raha niresaka ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro tao amin'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra misy azy ireo, tamin'izany fotoana izany, izay nizaka voka-dratsy tamin'ny orinasa [fitrandrahana] bauxite amin'ny lohasaha eo ambany. Saripikan'i Emma Lewis, nahazoana alalana.
EL: Ahoana ny lanjan'ny filma “fohy” sy “fohy maika” eo amin'ny fisoloam-bava ara-tontolo iainana, ary inona no mampiavaka azy ireo?
EF: Fohy maika no anarana tonga tao amiko nanaovako ny GEFF 2020. Ny Global Programme [Programa Manerantany] (nomena anarana indray hoe Global Perspectives [Tazana Manerantany] amin'izao 2021 izao) tamin'ny voalohany dia ireo famakafakana nisongadina. Ankoatra izany, nifantina mihoatra ny 70 aho—tati-baovao, fandalinana fohy, tatitra fikatrohana avy eny an-kianja—ary nandahatra azy ireo araka ny karazan'olana mifandraika amin'ny fitrandrahana.
Ireo fohy rehetra ireo dia azon'ny rehetra jerena avokoa ao amin'ny YouTube na Vimeo, ary avy amin'izay dia fanovozana mbola azon'ny olona idirana ihany aorian'ny fetibe. Nantsoiko hoe Urgent-Maika izy ireo satria—miaina ao anatin'ny fotoana maika isika ary mila mihetsika tahaka ny ataontsika, fa tsy vitan'ny milaza fa manana vahaolana majika eo akaikikaiky eo, na hoe any amin'ny hoavy any vao ho hita.
EL: Izay eritreretinao izany dia ilay fiantraikany ratsy indrindra amin'ny indostirian'ny fitrandrahana eto Karaiba?
EF: Mifototra amin'ny famonoana voaritontolo ny indostirian'ny fitrandrahana—manapotika izao tontolo izao voajanahary izay iankinantsika rehetra ry zareo. Mpandripaka olona ihany koa ry zareo; ohatra, ny fanohizany ny fandripahana ny vahoaka vazimba ao Guyana, ahitana fitrandrahana volamena mandrahona ny fisiana sady manapotika ny fiarahamonina ambanivohitra, vakoka, fanjariana ara-tsakafo sy ny fahalalàna ao an-toerana—tahaka izao mitranga eto Jamaika amin'ny fanafihan'ny indostirian'ny viraty amin'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra efa mihoatra ny 70 taona izao.
EL: Raha jerena ao amin'ny lafiny lahy sy vavy indray, manana faharefoana manokana ny vehivavy tantsaha any amin'ny faritra tena ambanivohitra, izay matetika loham-pianakaviana. Tsy manan-taratasin-tany ny ankamaroany. Voaresaka ve izany olana izany ao amin'ireo filma ireo?
EF: Maro ny filma ao amin'ny GEFF 2021 manasongadina vehivavy miady ho fiarovana ny rano, tany, hatsaram-piainana, kolontsaina, hoavin-dry zareo. Niezaka aho nitady mpiara-miombon'antoka hanatontosa Lanonana Virtoaly Manokana GEFF 2021 manana fifantohana feminista amin'ny fitrandrahana, satria fototra iorenan'ny kapitalisma anjakazakan-dehilahy ny fitrandrahana sy ny ideolojian'ny asan-dehilahy amin'ny fandrombahana ny natiora.
Miantraika ratsy kokoa amin'ny zazavavy, vehivavy/vatam-behivavy ny fitrandrahana ary ahazoan'ny zazalahy, lehilahy/manam-batana lehilahy tombony indrindra ara-toekarena noho ny fampiasan'ny indostirian'ny fitrandrahana—fa maningana amin'izany kosa ny fizahantany—amin'ny ankamaroany betsaka ny lehilahy sy ny manam-batana lehilahy. Fanampin'izany, ny fiantraikan'ny fitrandrahana sy ny tsy maintsy idirana amin'ny maodernite, tahaka ny krizin'ny toetrandro sy ny Anthropocene [fanimban'ny olombelona ny tany amin'izao fotoana izao] dia miantraika ratsy kokoa amin'ny vehivavy/zazavavy, manam-batana vehivavy. Indrisy anefa fa tsy nanana mpiara-miombon'antoka aho hampiatrano fantoka iray tahaka izany, amin'ny manaraka angamba!
Ny valiny dia ny hamaranana ny fanjakazakan-dehilahy, famaranana ny ideolojian-dahin'ny fandrombahana, ny famaranana ny toekarena ara-politika mifototra amin'ny tombontsoa sy ny ownership-propriété-fananana manokana, ary fanovana ny rafi-tsoatoavina manatsinontsinona ny voary, ny ambanivohitra, ny vehivavy sy izay an'ny vehivavy.
EL: Misy hazavana ve any amin'ny faran'ny lozoka (tonelina)?
EF: Tsy anaty lozoka isika, ilaina amin'ny fiainana ny haizina sy ny hazavana. Tsy maintsy ilaina izy roa ireo, ary izany no mahatonga ny fisian'ny andro sy ny alina sy ny vanim-potoanan'ny haizina sy ny hazavana.
EL: Manana tetikasa eo am-pananganana azonao lazaina anay ve ianao?
EF: Te-ho afaka manohy ny asako izay nanome aingam-panahy ahy hanomboka ny GEFF aho. Te-hanohy hiasa miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina manohy amin'ny fitsipahana fa izao ihany no tokana azontsika isafidianana aho.
Afrika Mainty15 Febroary 2016